Ny Tantara sy ny Mpitantara: Antsipiriam-pandaharana avy amin’ny Atrikasa 2015 · Global Voices teny Malagasy
Ny Tantara sy ny Mpitantara: Antsipiriam-pandaharana avy amin'ny Atrikasa 2015
Voadika ny 17 Septambra 2019 5:21 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Janoary 2015)
Amin'ity atrikasa notarihin'i Lauren ity, ny hahazo zavatra tsara indrindra amin'ny tafatafa ataon'izy ireo hanaovana tantara no tanjon'ny mpandray anjara. Raha mpilaza tantara ianao, ny tanjonao dia ny mikaroka ireo singa rehetra amin'ny tantara tena tsara avy amin'ny mpiara-miasa aminao ary manao ny fitantarana eo anoloany sy ny vondrona. Ny fanalahidy fototra dia ny fanajana ny tantara sy ilay olona izay lazainao ny tantarany, ary miezaka ny ho marina araka izay azo atao. Nanandrana tafatafa roa ireo mpandray anjara mba hanatsarana ireo teknika fototra samihafa:
Ireto misy teboka vitsivitsy hahafahanao mahatratra ireo tanjona ireo:
- Raha azo atao dia ampiasao kokoa ny tafatafa mivantana na amin'ny karajia lahatsary. Betsaka ny fampahalalana azo avy amin'ilay olona nanaovana tafatafa izay afaka manampy amin'ny fanoratana ny tantara araka ny tokony ho izy. Tsy ahazoana izany karazana fifaneraserana ilaina hitondrana na hanatsarana ny teboka lehibe asongadin'ny olona ataonao tafatafa izany ny tafatafa amin'ny imailaka.
– Mitanisa fampahalalana fototra vitsivitsy momba ny olona resahanao.
– manomàna ny lisitr'ireo fanontaniana / teboka fototra tianao resahana
Mandritra ny dinidinika:
– Raha handrakitra ny dinidinika ianao, dia ataovy azo antoka aloha fa tsy misy olana eo amin'ilay olona hohadihadianao.
– avelao ny olona hadihadianao hanana fotoana hamelabelarana teboka iray (fanontaniana misokatra farany)
– aza matahotra manontany zavatra manokana avy hatrany. Mety hitarika any amin'ny fitantarana lehibe ny tantaranao izany.
– mandefera amin'ireo fanontaniana, hevero toy ny resadresaka fa tsy famotopotorana ny tafatafa ataonao.
– Mampiasà fanafohezan-teny mba hahazoana antoka fa voamarikao daholo ireo teboka sy zava-misy rehetra nozarain'ilay olona nohadihadianao.
– Fanteno tsara ny fomba fiteny izay mety hasongadinao.
– hamarino tsara miaraka amin'ny olona ataonao tafatafa ny tarehimarika rehetra, ny zava-misy lehibe ary ny fanoratra anarana.
Rehefa vita ny tafatafa dia:
– jereo ny taratasinao ary safidio ny fampahalalana lehibe izay ho ampiasainao hilazana ny tantara
– Fanteno ny fitantarana izay hohamafisinao.
– Mitadiava fihantonana tsara. Safidy iray ny famaritana ny tontolo manodidina ny tafatafa, ny fihetsiky ny olona hadihadiana mba hahatonga ny tantara ho mora vakian'ny mpamaky.
– Farano amin'ny zavamamy fitelina (vatomamy) izay mandravaka ny fitantarana ataonao ny fehin-kevitrao.
Raha mila fampahafantarana maro kokoa momba ny fanatontosana tafatafa mahomby ianao, dia mifandraisa amin'i Lauren azafady.
Izay no tamin'ity Andro faha-2 tamin'ny #GV2015 tao an-tanànan'i Cebu ity.